ChiGerman, Germany muna 2015. Germany am - Turkey 'Did ??? - CHIJERIMANI
Muna 2015 Germany zviri - Turkey 'Ko ???
0 Nhengo uye 2 Vashanyi vari kuona nyaya yacho.
« : Chikumi 03, 2015, 09:52:07 am »
Shamwari dzinogara dzichikurukura nezvenyaya, asi ndinoziva iwe unofunga ndinoda kuvandudza nguva yenguva yatinogara kuGerman kana kugara padenga rangu muTurkey zvakanyanya kubatsira. Ini ndinongoda kuti uve akatendeseka newe uye upindure nenzira iyi.Kana tichinyatsoratidza mamiriro ezvinhu atiri, pamwe tichaparadza kumwe kusarura. Kune vanhu vazhinji mumusangano, mufaro wavo mukuita kwevisa uye kusuwa kwavo mushure mekuwana vhiza.
Ndevaya vanogara chaizvo kuGerman uye avo vanozviti havana mufaro vakarurama?
Kana kuti avo vaishuvira zvikuru kuenda kuGermany uye vakaona ruponeso ikoko here?
Re: 2015 Germany 'm - Turkey' Ko ???
« Reply #1: Chikumi 04, 2015, 04:43:13 am »
Mhoro tambo dzakanaka iwe ACMIS zviri pachena mativi maviri mune akawedzera uye mashoma ari pachena kuchinja, zvinoenderana nekumwe kukura pane kana kubvisa munhu ini ndakaudza gözlemledigi zvishoma zvangu nenzvimbo yakatenderedza izvi ndozvazvinoita iye zvino mabasa muTurkey kana usingaiti kana iwe uine basa rinoshanda pano kana usingaite pano ndichatora mihoro kumusoro nekudzika zvine chokwadi chekuti kana imwe yevakomana iwe hauzive isu here, sekuturkey uye kuziva hakuna vakawanda maindasitiri mukutanga diploma pano uye zvinopesana pekutanga diploma ipapo kuda kana diploma vari kutsvaga kugona mune iro basa kusvika tenzi akakosha kwete kosi varume ndinoziva ndine shamwari turkey mubhizimusi rekugadzira shangu bhizinesi calisiyormus muhoro pano zvisati zvanaka hazvina kumboita tsvagiridzo haana kuseta ini ndakabvunza kana ndikanogona kushanda ikoko uye iye zvino haana mukana wekuita basa rake pano. Ehe, ini ndanzwa mamiriro aya chaizvo, vanhu vari kuudza nzvimbo ino zvakanakisa kana pese pese pane basa uye muhoro wakanaka kwazvo.Kana pakupedzisira kupinda basa hakusi kungoita nezvebasa raida kuzvitsanangura zvakakwana kuti vazive zvakajairika zvechiGerman kuve nyanzvi yemutauro wechiGerman wauri kutanga kubva kune yako anliyacag zero hupenyu pano kuraira kwangu kune ramangwana shamwari, kana iyo turkey mune basa rakanaka une zvakanaka zvawakagadzira pano kana paine imwe muno kuti mukadzi wake akanaka basa pano kana iwe uchidaro haishande zvachose marongedzero Usataure kuti ini handigone kuuya prune uko hupenyu hwemagariro huri hushoma ihwohwo hupenyu husinganakidzi hwakakumirira iwe renti hwakavakirwa paTurkey unenge uri kunze kwekambani subcontractor cog yepamusoro uchayedza pano kuchekerera iwe kwawakagamuchira yakakwira haisi yakanaka kwazvo mari mumutero-zvingave zvakabviswa zvakanyanya mukosi yemubhadharo E yakabatana nekuda kweiyo esse yemamiriro ekushanda mu tabiikii akanaka kumafaro, ivo vaizowana vanhu vaviri pano mari iri nani kana ichienzaniswa neyeTurkey kana iwe ukashanda nezvakawanda zvekuda kuve nevhiki rezororo mvumo yegore iri zvimwe zvekudya neTurkey will kuve pamitengo yemota mune chimwe chinhu chinotaurira zvakanyanya kukodzera kupfuura iyo yemagetsi turkey basa kubva kuazide ini ndichapfupisa yangu yazdik kuona kana yangu turkey Germany zviri pachena izvi zvinhu zvinosiyana kubva kumunhu kusvika kune munhu mune yavo yekupedzisira munhu wese anozoongorora yake mamiriro, ini ndakanyora izvo zvandinoona
Chaizvoizvo, ndakafunga ndisati ndanyora kana kuti kwete, nekuti hazvina basa kune avo vachauya pano nekuti vanhu vazhinji vanonzwa kunge vari pamakore vasati vauya kuno. Vaudze zvaunoda. Bvunza zvakapfuura zvichiitika tabiikii ichaita iyo posvo saka chero kalmiy yezviroto zvako pano chikumbiro chako ndakamonera shamwari dzeramangwana usadzungaira nezvenyika yekurota mushure mekupunzika kwavo uchati, sei wakaendako ozaman my chikuru factor esim here in my coming to have a good profession uye basa racho richava rakaoma kuita muTurkey hongu zvangu mukati Kana iwe uchiti unodemba kuva nebasa rakakodzera pano?
Ini ndaisada kuve nehanya nenyaya yeshamwari, kunyangwe ndaisaziva kuti kunyora kwangu hakuna kukosha, asi ibasa ravanozoziva nekukurumidza pandinoda kunyora, ndazadzisa basa rangu rekubatsira.
« Reply #2: Chikumi 04, 2015, 08:51:06 am »
Iwe wakanyora chaizvo. Iwe unoziva panotarisana neni musoro, ndine hama dzepedyo munyika mbiri idzi. Asi nekuda kwechimwe chikonzero munhu wese anoyemura hupenyu hweumwe neumwe. Mumwe munhu anoti une shongwe yevasikana, une gungwa, uye mumwe wacho anoti une peturu yakawanda, mota dzakachipa, zororo rakachipa ipapo. Kana tichienzanisa nyika mbiri idzi, inzvimbo inoyevedza kana mota yezororo yatinonyatsoda kutora sehwaro? Patinokurukura nezvenyaya iyi nemunin'ina wangu, anoti mune dzidziso yake ndinoda kugara kuGerman. Mwana wangu ari nani uye anobatsira pakurera mwana akura aine mitauro mitatu, hongu, zvipo zvehurumende zviri nani uye zvinobatsira.Akati ndinoda kuti mundinzwisise. Ndati urikureva, ndazvipa chaizvo. Mukoma wababamunini iyeye anogara kuGerman. Oda akataura kuti kuda kwake Istanbul, gungwa uye kushomeka kwechipiri-kirasi ugari waakagara imomo, hupenyu hauna kumbobvira hwave nyore kudaro, uye kurira kwengoma kunonakidza kubva kure. Ndati ndamupa kodzero, uye uri kutaura chokwadi. Zvino pakave nechinoitika chidiki pakati pedu, hama yangu muTR akandiudza kuti sei aitaura chokwadi, akatenga BMW 22 yezviuru makumi matatu TL. naye uye ndinozadza 30 tl. Yangu LPG tangi inoizadza iyo 5.20 €. Ndakanga ndisingazive kuti nei ndaizove, vaviri vacho vanonetseka uye vese vari vaviri havana mufaro. Mumwe anoda kurarama hupenyu zviri nyore, mumwe anoshuvira nyika yekumusha, anoshuvira mhuri uye achifunga kuti akabviswa munyika yaanogara. Ivo vaviri vanofunga kuti hupfumi hwenyika yavanogara hwakaipa uye havasi kufara. Ndeupi asinganyatsofara Ndeupi akarurama
« Reply #3: Chikumi 04, 2015, 10:49:00 pm »
Yakatorwa kubva: 1963 - Chikumi 04, 2015 pa 04:43:13 am
Mhoro tambo dzakanaka iwe ACMIS zviri pachena mativi maviri mune akawedzera uye minus ari pachena akavakirwa padiki pakukura pane kana vanhu vanhu vari kuchinja izvozvi, ini ndichaudza gözlemledigi yangu yangu nenzvimbo yakapoterera izvi ndizvo zvaungave uine diploma inofanira basa muTurkey haina kana iwe une basa rinoshanda pano kana usingaite pano ndichatora mihoro kumusoro nekudzika kune chokwadi chekuti kana imwe yevakomana iwe hauzive, tinoda uye tinoziva kuti basa harisi dhijitari rekutanga mumatunhu mazhinji muTurkey uko iyo yekumberi diploma yekupedzisira inoda kana diploma iri kutsvaga kugona muhunyanzvi haina kukosha kusvika pakuziva iri mune iyo kosi varume vandinoziva ndine shamwari mubhizimusi rekugadzira shangu muTurkey calisiyormus muhoro pano zvisati zvanaka haana kumboita tsvakiridzo isina kusetwa ini ndakabvunza kana ndikanogona kushanda ikoko uye ikozvino haana mukana wekuita basa rake pano. Ehe, ini ndanzwa mamiriro aya chaizvo, vanhu vari kuudza nzvimbo ino zvakanakisa kana pese pese pane basa uye muhoro wakanaka kwazvo.Kana pakupedzisira kupinda basa hakusi kungoita nezvebasa raida kuzvitsanangura zvakakwana kuti vazive zvakajairika zvechiGerman kuva nyanzvi yemutauro wechiGerman wauri kutanga kubva kune yako anliyacag zero hupenyu pano kuraira kwangu kune ramangwana shamwari, kana iyo Turkey iri mubhizimusi rakanaka une zvakanaka zvawakagadzira pano kana paine mumwe muno kuti mukadzi wake basa rakanaka pano kana iwe usashande zvachose marongedzero Usati handikwanise kuuya prune uko hupenyu hwemagariro huri hushoma ihwo hupenyu husingafadzi kumirira iwe imba rendi neTurkey unenge uri kunze kwekambani subcontractor cog yepamusoro uchayedza pano kuchekerera iwe watambira yakanyanya kukwirira kwete mutero Mutero unenge uri wakanyanya kuderedzwa mumubhadharo kosi E yakabatana nekuda kwesse yemamiriro ekushanda mu tabiikii vane mapato akanaka angavapa zvirinani vakabvumidza coke yegore rose inoda kupera kwevhiki zororo kune maviri anouya zvirinani kana pano Rwiyo rweTurkey nechikafu chakawanda ipapo pane chimwe chinhu chakataurwa pamitengo yemota inokodzera kupfuura iyo yeTurkey kugarwa neTurkey Ini ndichapfupisa yangu yazdik inosarudza kana Germany yaive, chokwadika, izvi ndizvo zvinhu zvangu zveTurkey zvinosiyana kubva pamunhu kusvika kune avo pakupedzisira munhu wese anozoongorora mamiriro ake, ndakanyora zvandinoona
Ndakagara ndanyora zvirevo pamusoro penyaya iyi zvakaenzana nepfungwa dzako. zvawakanyora chaizvo. Ndinewe panyaya iyi
Ndine maonero akafanana. Zvakapfupikiswa.
« Reply #4: Chikumi 05, 2015, 12:52:44 am »
Quoted from: Reyya - June 04, 2015 at 10:49:00 pm
ndinokutendai nemafungiro enyu
« Reply #5: Chikumi 07, 2015, 12:43:03 pm »
Ehezve, mamiriro acho anochinja zvinoenderana nezvinotarisirwa nevanhu uye nemararamiro ehupenyu. Kana iwe uine chiGerman chakaringana kuita basa rakakodzera kuGerman, zvirokwazvo Germany iri nani. mitero yakakwira mugermany asi zviyero zvakare zvakakwirira. Chero bedzi paine mutauro nebasa, kugara kuGerman kuri nyore kwazvo uye kuri nyore.
« Reply #6: Chikumi 07, 2015, 03:47:23 pm »
Ndichine nzara tini zviitiko muTurkey,
Zvese pano mari, nyika zviri pamutemo inokurudzira vashandi kuti vave nousimbe, vasashande,
Iko hakuna mukana pano,
Kunyangwe murume nemukadzi vachishanda, mari yepamusoro yaunowana haidarike 2500, inotoenda ku1500. mitero yakanyanya kukwirira,
mutero pane zvese,
Vakabatanidza vanhu ne robhoti, iwe unoziva robhoti iri muchimiro chemombe, vanokama bızt bızt kubva kumativi ese, kwese kwaunoenda,
« Reply #7: Nyamavhuvhu 22, 2015, 02:18:44 pm »
Yakatorwa kubva ku: tugce_doerjer - Chikumi 07, 2015 na12: 43: 03 pm
Ehezve, mamiriro acho anochinja zvinoenderana nezvinotarisirwa nevanhu uye nemararamiro ehupenyu. Germany iri nani zvirinani kana iwe uine zvakakwana zveGerman kuita basa kuGerman. mitero yakakwira kuGerman, asi zviyero zvakare zvakakwirira. Chero bedzi paine mutauro nebasa, kugara kuGerman kuri nyore uye kuri nyore.
Iwe wakapfupikisa chiitiko ichi mugermany hupenyu hwakanaka hwakareruka nechero mhando yeTurkey.